Yuchai Diesel Generator ကဘာလဲ။ - MECCA ပါဝါ
နေအိမ် / သတင်း / သတင်း / Yuchai Diesel Generator ကဘာလဲ။
Yuchai Diesel Generator ကဘာလဲ။
views:0 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-08-16 မူလ:ဆိုက်ကို
Yuchai အကြောင်းသင်မသိနိုင်ပါဒီဇယ်စက်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အသုံးပြုသော set ကို, ဒါကြောင့် Yuchai ဒီဇယ်မီးစက် set နှင့်၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုသင့်အားပြပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းတွင်အင်ဂျင်, Generator နှင့် Control System ပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့်မီးစက်အစုဟုခေါ်သည်။ Yuchai Diesel Generator Set သည်စွမ်းအင်မျိုးဆက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်ပြီးမြန်ဆန်စွာလည်ပတ်နိုင်ပြီးအလွယ်တကူရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်, Yuchai Diesel Generator Set ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုပိုလေ့လာကြပါစို့။
Yuchai Diesel Generator ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
Yuchai Diesel Generator Set သည်ဒီဇယ်နှင့်အဓိကလောင်စာအဖြစ်စွမ်းအင်မျိုးဆက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်သည်။ Yuchai ဒီဇယ်အင်ဂျင်များသည်မီးစက်မှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်တွန်းအားပေးခြင်း, Yuchai Diesel Generator Set ကိုအောက်ပါအပိုင်းပိုင်းခွဲထားသည်။
1. OWLONTIONS, အင်ဂျင်များနှင့်အအေးခံစနစ်များတပ်ဆင်ခြင်းအတွက် Yuchai ဒီဇယ်မီးစက်သည်အလုပ်တွင်ပါဝင်သောကြောင့်ကောင်းမွန်သောလက္ခဏာသက်သေပြခြင်းအတွက်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိရန်လိုအပ်သည်။ ထိတ်လန့် - အထောက်အထား၏ဒီဂရီ။
3. System System: Yuchai Diesel Generator Set Start System ကို Air Start စနစ်နှင့် 24V DC Start သို့ခွဲခြားထားသည်။
4. မီးစက်:Yuchai ဒီဇယ် Generator အစုံalternator ကိုအသုံးပြုနေသည်။
5. ထိန်းချုပ်မှုစနစ် - ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသောစစ်ဆင်ရေး, ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ရှိသည်။
Yuchai Diesel Generator Set သည်အသေးစားနှင့်အလတ်စားပါဝါထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းများဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေး, သတ္တုတွင်းတူးဖော်ခြင်း, လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း, လယ်ယာမြေများ, လယ်ယာမြေများ, လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး, နှင့်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးအင်ဂျင်နီယာနှင့်အခြားဌာနများ။ အဓိကအားဖြင့်အဓိကလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်မှုနှင့်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနယ်မြေများနှင့်အခြားအချိန်များကိုလွတ်လပ်သောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး, ထောက်ပံ့ရေး။
Yuchai ဒီဇယ်အင်ဂျင်အင်ဂျင်သည်ဒီဇယ်လောင်စာစွမ်းအင်ကိုလျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲရန်အင်ဂျင်ကိုမောင်းနှင်သည်။ Yuchai Diesel Engine ဆလင်ဒါများ၌လေကြောင်းလိုင်းများမှ filter လုပ်ထားသောသန့်ရှင်းသောလေထုသည်လောင်စာဆီ injectors မှရေဖြန်းထားသည့်ဖိအားများအနေဖြင့်ဖိအားမြင့်သောဒီဇယ်လောင်စာနှင့်လုံးဝရောနှောထားသည်။ ဆလင်ဒါတစ်ခုစီသည်အမိန့်တစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်သည်။
Yuchai Diesel Generator MECCA POWER မှ0န်ဆောင်မှုပေးခြင်းမပြုမီကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်ရန်ကုမ္ပဏီမှမထွက်ခွာမီစမ်းသပ်ခြင်းများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Yuchai Diesel Generator အစုံအမျိုးမျိုးကိုသင့်အားပေးရန်သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်နေပါသည်။
Yuchai ဒီဇယ် Generator အစုံ အသံတိတ်ဒီဇယ်ထုတ်လုပ်သူအစုံ ဒီဇယ်ထွန်းလင်းစက်ကိုဖွင့်လှစ် Trailer သည်ဒီဇယ်ဆီထုတ်လုပ်သောအစုံ ဒီဇယ်မီးစက်သည်လွယ်ကူသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုသတ်မှတ်သည် စဉ်ဆက်မပြတ်ဒီဇယ်ဆီမီးစက်အစုံ Cummins ဒီဇယ်ဆီမီးစက်တပ်ဆင်ထားသည် အသံတိတ် cummins ဒီဇယ်ထုတ်လုပ်သူ set